Saxafiyiinta Puntland oo Madaxweyne Deni kala hadlay xaqa galaangalka iyo helidda xogta – Kalfadhi
Saxafiyiinta Puntland oo Madaxweyne Deni kala hadlay xaqa galaangalka iyo helidda xogta
Ururku saxafiyiinta Puntland ee MAP ayaa shaaciyay in xal laga gaaray cabasho ay warbaahintu ka muujiyeen sida ay madaxtooyadu ula macaamishay cawaysinkii Axada oo ah goortii la magcaabay golaha wasiirada cusub ee Puntland iyo Talaadadii oo iyana uu dhacay kulan lagu dhaarinayay xukuumadda cusub. Saxaafadda xorta ah ayaa laga celiyay in ay ka qaybgalaan wararkaas.
Madaxtooyada ayaa fursadda qabashada iyo tebinta wararkaas waxay u ogolaatay TV-ga dowladda ay maamusho ee Puntland TV oo keliya, halkaas oo saxaafadda madaxa-banaani u doonanayeen wararka dhacdooyinkaas la xiriira. Madaxtooyadu hore ugama hadlin ujeedada go’aankeeda iyo cabashada saxaafadda.
Gudoomiyaha ururka MAP Maxamed Daahir Caynsane ayaa sheegay in madaxda ururka iyo guddi ay agaasimayaasha hay’adaha warbaahintu u saareen arrintan ay xalay la kulmeen madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullahi Deni, iyagoo kala hadlay dhawr qodob si loo dhawro xuquuqda iyo badqabka saxafiyiinta.
Muhiimadda ay leedahay dhaqan gelinta xaqa helida xogta, Xoojinta xiriirka warbaahinta iyo dowladda. Badqabka suxufiyiinta Puntland iyo baahida loo qabo in masuuliyad ay dowladdu iska saarto dabagalka iyo baaritaanka kiisaska wariyaasha la xiriira ayay saxafiyiintu hor dhigeen madaxweyne Deni, sida lagu sheegay war ka soo baxay MAP.
Baraha bulshada ayay saxafiyiintu ku muujiyeen sida ay uga xun yihiin in laga xakameeyay tebinta dhacdooyinkaas, iyagoo qoraaladooda u cuskanayay xeerka warbaahinta Puntland ee baarlamanku ansixiyay isla markaasna madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali uu saxiixay, disembar 2017.
Kulankii xalay, madaxweyne Deni wuxuu garawshiyo ka bixiyay cabashada saxaafadda, sida uu Kalfadhi u sheegay Gudoomiyaha MAP Caysane.
Sida ku cad qodobka 3aad xuquuqaha iyo waajibaadka warbaahinta farqadiisa 7aad ayaa hay’adaha dowladda iyo kuwa gaarka ahba ku waajib yeelaya in aan suxufiyiinta laga hor istaagi karin xogaha iyo galaanka wararka.
“Warbaahintu xaq bay u leedahay in ay hesho oo galaangal u yeelato wararka iyo macluumaadka ummadda (Public Information), si loo wargeliyo dadweynaha bulshaduna dhab ahaan ula socon karaan go’aamadda la gaaray , sida lagu gaaray, iyo hadii danahooda loo adeegay. Sidaa daraadeed hay’addaha dowladda iyo kuwa dadweynaha ka dhexeeya waajib bay ku tahay in ay siiyaan oo u sahlaan warfidiyeenka iyo saxaafadda xogta iyo galaan-galka ay u baahan yihiin.” Ayuu qorayaa xeerku.
Saxafiyiinta ayaa xukuumadihii hore ee Puntland kala kulmi jirtay xarig aan maxkamadi amrin isla markaasna aan inta badan la ogaan jirin cidda rasmiga ah ee soo amartay iyo handadaad, sida ay war-saxaafadeedyo dhawr ah ku shaaciyeen ururka MAP.
Madaxweynaha cusub ee Puntland Siciid Cabdulahi Deni ayaa barnaamijkiisa siyaasadeed ku xusay ilaalinta iyo dhawrista xorriyaadka asaasiga ah ee dadka, waxaase walaac abuurtay macaamilka cusub ee madaxtooyadu ku wajahday suxufiyiinta.
Madaxweyne Lafta-Gareen oo dhameestiray Golahiisa Wasiirada
Wasiir Beyle “20 Shirkood oo waa wayn ayaa diiday bixinta Canshuurta”
Wasiir Beyle "20 Shirkood oo waa wayn ayaa diiday bixinta Canshuurta"